Inona no Atao Atom?
Fanazavana atomika sy ohatra
Ny tranoben'ny zava-manan'aina dia antsoina hoe atôma. Na izany aza dia mety hanontany tena ianao hoe inona marina tokoa, atomika inona? Ity misy fijery ny atoma sy ny atoma sasany.
Ny atôma dia singa fototra iray amin'ny singa iray. Ny atoma dia endriky ny zava-misy izay mety tsy haravoana amin'ny fampiasana fitaovam- piasana. Ny atoma iray dia misy proton, neutron ary electron.
Ohatra avy amin'ny Atom
Ny singa rehetra voatanisa ao amin'ny latabatra dia misy atoma.
Hydrogen, helium, oksizenina, ary uranium dia ohatra amin'ny karazana atôma.
Inona avy ny atoma?
Ny zavatra sasany dia kely na lehibe kokoa noho ny atoma. Ohatra tsy ampy amin'ny teny nôvialy Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny nerlandey Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny nerlandey Ohatra tsy ampy amin'ny teny nerlandey Ny molotra sy ny vovoka dia mifototra amin'ny atôma fa tsy ny atôma. Ohatra ny molekiolao sy ny vovoka dia ny sira (NaCl), ny rano (H 2 O) ary ny ethanol (CH 2 OH). Misy atôma antsoina hoe ion. Mbola misy karazana atôma ihany izy ireo. Ny volana monoatomika dia ahitana H + sy O 2- . Misy ihany koa ny ion-molekiolana, izay tsy atôma (oh: ozon, O 3 - ).
Ny faritra Grey eo anelanelan'ny atoma sy ny proton
Ho hitanao fa misy atomôma iray misy rano ao anaty atomôma ve ianao? Tadidio fa tsy misy proton, neutron, ary electron ny ankamaroan'ny "atôma". Noho ny isan'ireo protons dia mamaritra ny maha-izy azy ny singa iray, maro ny mpahay siansa no mihevitra ny hetsi-pitenenana iray ho atônôma ao anaty rano .
Inona no atao hoe formula d'explosifique?
Fiovana eo amin'ny lanjan'ny atomika sy ny atomika
Structures chimiques manomboka amin'ny taratasy L
Firy ny proton, neutrôn ary elektronita ao anaty atomaty?
Inona no atao hoe blasfemia ao anaty rano?
Structures chimiques manomboka amin'ny Taratasy O
Sekoly fianarana fianarana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa
Mitsambikina voninkazo manodidina ny Rose
Ady sefon'ny Amerikanina: Brigadier General Albion P. Howe
10 Facts mahavariana momba ny bibikely
Fanadihadiana momba ny gnostisma amin'ny famaritana sy ny finoana
Fitondran-tena sy soso-kevitry ny saina rehefa mahafantatra ny Sikh Gurdwara
Inona no fahasamihafana eo amin'ny dihy tapakila sy ny fikomiana?
Hafatra diso: Tsy mahita famantarana
Matoanteny amin'ny teny anglisy Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny anglisy
Icebreaker Games: Icebreaker Teamwork
Fampidirana ny Architectural Art Deco
Nalain'i Palpatine ny ady tamin'ny Windu tany amin'ny Star Wars Episode III?
Ny alahelon'ny Young Werther (1774) nataon'i Johann Wolfgang von Goethe
'Fitsapana mankany India'
Ny vatsim-pianarana amin'ny kolontsaina amin'ny daty Jona
Ny vondrona Aryl ao amin'ny Chemistry
Tenin'ny fiarovana ara-tafika
Inona no atao hoe R & B Music?
Ny Brick - A Noisy Clunker amin'ny tifitra iray